सीके राउतको जीवनीमा फिल्म बन्ने, छठमा रिलिज गरिने « Khabarhub
सीके राउतको जीवनीमा फिल्म बन्ने, छठमा रिलिज गरिने
काठमाडौं – जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा‍‍‌. सीके राउतको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘डा. सीके राउत’ निर्माण हुने भएको छ । यो फिल्म ५० प्रतिशत सीके राउतको जीवनीमा आधारित हुनेछ भने ५० प्रतिशत काल्पनिक हुने निर्माण टिमले जनाएको छ ।
बुधबार राजधानीको ‘क्युज सिनेमा’मा आयोजित कार्यक्रममा फिल्मबारे जानकारी दिइयो । टिजर समेत सार्वजनिक गरिएको यो फिल्म आउँदो छठमा रिलिज हुने जनाइएको छ । कार्यक्रममा आधाभन्दा बढी सीके राउतका पार्टीका कार्यकर्ताहरु उपस्थित थिए ।
माँ राधिका इन्टरनेशनल मुभिजले चलचित्र निर्माण घोषणा गर्दै केक काट्यो । कार्यक्रममा सीके राउत पनि उपस्थित थिए । उनले यो फिल्मले दर्शकले आफ्नो बारेमा बुझ्न भूमिका खेल्ने प्रतिक्रिया दिए ।
फिल्मलाई सन्तोष साहले निर्देशन गर्नेछन । भोजपुरी चलचित्रका सुपर पावर भनेर चिनिएका परदेशी शाहले डा. सिके राउतको भूमिका निभाउने भएका छन् । परदेशीले पर्दामा सीके राउतको भूमिका निभाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
यस्तै चलचित्रमा परदेशीका अलावा धुर्ब कोइराला,पुकार भट्टराई,बिशाल पहाडी, किरण थापा लगाएतका कलाकारको मुख्य अभिनय रहने जनाइएको छ ।
फिल्मलाई पवन गौतमले छायांकन गर्नेछन् भने रेवन्त बिक्रम थापाको द्वन्द निर्देशन रहने छ । चलचित्रमा रामजी लामिछाने र लिगेश भट्टराईको कोरियोग्राफी रहनेछ। यो चलचित्र नेपाली, भोजपुरी र हिन्दी भाषामा निर्माण हुने र अङ्ग्रेजी उपशीर्षक समेत राखिने जनाइएको छ । झण्डै डेढ करोडको लागतमा फिल्म बन्ने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७६, बिहीबार २ : ०० बजे